सुन्धारा होटल व्यवसायी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन
२०७५ बैशाख ६ गते
काठमाडौं । सुन्धारा होटल व्यवसायी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । चैत ३० गते भएको साधरणसभाले बुद्धिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । संघले आज सुन्धारास्थित सिभिल मलमा पत्र ...
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा सेयर विवादले लाभांश वितरणमा रोक
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापक लगानीकर्ताको शेयर विवादका कारण शेयर सदस्यहरूले लाभांश पाउन सकेका छैनन् । कम्पनीले आम शेयर सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत् ...
जागिर लम्ब्याउन पण्डितको यस्तो हर्कत, गैर कानुनी काममा गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र उनका खास सहयोगी निर्देशक राजेन्द्र पण्डितको भित्री खेलका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र तरंग मच्चिएको छ । पण्डितको हितलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीको तीस वर्षे से ...
इक्यान निर्वाचन : यसरी शक्तिशाली बन्दै छ बस्नेत समूह
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आउँदो शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा प्यानलसहित दुई वटा समूहले उमेदवारी दिइसकेका छन् । बुधबार दुबै समूहले मनो ...
एनआईसीको ऋणपत्र नेपाल स्टकमा सूचिकृत
२०७५ बैशाख ४ गते
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जारी गरेको '९ प्रतिशत एनआईसी एशिया ऋणपत्र २०८१/८२' नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रस ...
दुई सातामै फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले दुई साताको बीचमा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा २÷२ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। सोमबार बस ...
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले समयमा खानीको उत्खनन र खोजतलास नगर्ने २० कम्पनीको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा खनिज खोजतलास कार्यका लागि अनुमतिपत्र लिए पनि समयमा खोजतलास नगरे ...
सानिमाको होम बैंकिङ सेवामा यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । सानिमा बैंकले होम बैंकिङ सेवाको शुरुवात गरेको छ । बैंकले नयाँ वर्षको अवसरमा जेष्ठ नागकिलाई लक्षित गरेर ५८ बर्ष पुगेका नेपाली नागरिकहरुले उपभोग गर्न पाउने गरी यो सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । य ...
इक्यान निर्वाचनमा यसकारण बलियो बन्यो सरोज बस्नेतको प्यानल
चितवन । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आउँदो बैशाख ८ हुने निर्वाचनका लागि सरोज बस्नेत नेतृत्वको प्यानलले सबैलाई सप्राइज दिदै मोफसलबाट औपचारीक उमेद्वारी घोषणा गरेको छ । बुधबार दिउसो चितवनम ...
चितवनको गीतानगरमा एनआईसी एशिया बैंक
चितवन । एन आई सी एशिया बैंकले चितवनमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिका ६, चोक बजार, चितवन स्थित गीतानगर चोकमा एनआईसीले नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रे ...
भाटभटेनी सुरपमार्केटमा लागेको आगो नियन्त्रणमा
२०७४ चैत्र २५ गते
बुटवल । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। झण्डै पाँच घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा आएको हो। आगोका कारण सुपरमार्केटको पाँचौं तल्लामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। बुटवल उपमहानगरपा ...
बैंक डिफल्टर हावी भएपछि एफएनसीसीआईका महासचिवद्धारा राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । अध्यक्ष भवानी राणाले नेतृत्व सम्हाल्न नसक्दा महासंघभित्र भाँडभैलो मच्चिएको हो । महासंघकोे ५२ औं साधारण सभा आउन २६ दिन मात्र बा ...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई÷दुई रुपैयाँ मूल्य बढाएको आयल निगमले जनाएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य लिटरका एक सय पाँच रुपैयाँ र डिज ...
एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष घलेद्वारा बालुवाटारस्थित निर्माणाधीन भवनको अवलोकन
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पुर्व अध्यक्ष शेष घलेले आइतबार बालुवाटारस्थित एनआरएनको निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गरेका छन् । सो अबससरमा घलेले एनआरएनको भवन साझा बिचार आदान ...
शैक्षिक क्षेत्रमा अब्बल शिक्षण संस्थाको पहिचान बनाउँदै भ्याली पब्लिक हाई स्कूल
काठमाडौं । विद्यार्थीहरूलाई समयसापेक्ष शिक्षा, संस्कार र सीप प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्य बोकेर सञ्चालन गरिएको भ्याली पब्लिक हाई स्कूलले २५ औं वसन्त पार गरेको छ । वि.सं. २०५० सालमा स्थापन ...
लागनीकर्ता नै बेपत्ता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक वर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । आयोजनामा छिमेकी राष्ट्रसहित अन्य राष्ट्रहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौंमा भएको सम्मेलनमा सहभागि भएको स ...
मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भिर : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भबिष्यमा चाल्नुपर्ने रणनीतिसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको हालको आर्थिक अवस्था सार्वज ...
राज्यलाई एक अर्व आर्थिक भार पर्ने गरी भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता
काठमाडौं । बर्षामान पुन उर्जा मन्त्री बनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण गरेका ...
भण्डारीका कारण धराशायी बन्दै लालिगुँरास सहकारी
ललितपुर । कुनै समय मिटरब्याजका नाइके महेश सिंहको अवैध लगानी रहेको श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड यतिखेर धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुल्चोकमा रहेको लालिगुँरासले मनपरी ऋण प् ...
एनआईडीसीमा करोडौं घोटला, यादव फरार
काठमाडौं । एनसीसी बैंक घोटला प्रकरणपछि एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको पनि कर्जा रकम दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर आएको छ । एनआईडीसी बैंकका पूर्व सिइओ शिवजी राय यादव यतिखेर पक्राउ पर्ने डरले फरार रहेका छन् । ए ...
डेढ अर्ब घोटला प्रकरणमा मुछिएका गभर्नरलाई हटाउने तयारी
२०७४ चैत्र १० गते
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाइल लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा हटाउने ...
नागरिक लगानी कोषको लगानी एक खर्व बढि
सुविधा दिन नयाँ योजना : कार्यकारी निर्देशक पोखरेल काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष २७ वर्ष पूरा गरी २८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासको मूख्य लक्ष्यसहित स्थापना भएको यस कोष २०४६ सालको राजनीत ...
टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध,कामिनीले एनसेलसँग सांठगागांठ गरेको आशंका
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत कुनै जानकारी दिएको छैन । विहिबार विहानै देखि नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड, प्रीपेड लगायतको मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । सेवा अवरुद्ध भएपछि सर ...
करोडौं विदेशी मुद्रा अपचलनमा मुछिएका गोविन्दलाल नेपाल लाईफको अध्यक्ष
काठमाडौं । सबैभन्दा बढि बोनसदर बाँड्दै आएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका नयाँ अध्यक्ष गोविन्दलाल संघाईमाथि एकपछि अर्को समस्या थपिएको छ । करोडौं विदेशी मुद्रा अपचलनमा मुछिएका उनी अहिले भने न ...
डिएभी कलेज अफ म्यानेजमेन्टले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै
ललितपुर । डिएभी सुशील केडिया कलेज अफ म्यानेजमेन्टले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी मार्च २४ र २५ अर्थात चैत १० र ११ गते हुने सम्मेलनमा नेपाल सहित भारत, फ्रान्स र चीनका प्रोफेसरहर ...
अर्बौ पुँजी भएका बैंक एक लाख रुपैयाँ पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा
काठमाडौं । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु अहिले एक लाख रुपैयाँ पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न नआएपछि पुँजी अभावमा कर्जा लिन आउनेहरु रित्तो हात फर्कन बाध्य भ ...
एनसीसी बैंकका सञ्चालक धितालसहित १३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईवी) ले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी) सञ्चालक विष्णुप्रसाद धितालसहित अन्य १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिआईवीले दुई अर्ब रुपैयाँ ...
प्रत्येक नेपालीमाथि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ हजार भन्दा बढि ऋण थपियोे
काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २८ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो छ हजार भन्दा बढिले बृद्धि भएको हो । सरकारको कुल ऋण ८ खर्ब ३० अर्ब ९८ करोड ३७ लाख पुगेकाले नेपालीमाथि प ...
बूढीगण्डकीसहित ७४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं । बु्ढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ आयोजनाको अनुमतीपत्र खारेज भएको छ । पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि प्रवद्र्धकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी ...
बैंकर्स एशोसिएशनको निर्णयप्रति एनआईसी एसियाको आपत्ति
२०७४ फागुन २५ गते
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको निर्णयप्रति एनआईसी एसिया बैंकले आपत्ति जनाएको छ । एशोसियशनले ब्याजदर नघटाएका कारण एनआईसी एसियासँग अन्तरबैंक कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेलगत्तै बैंकले आपत्ति प्रकट ...
राजनीतिक दलले स्थार्थ पूर्तिका लागि रकम माग गर्दा मन्त्रालय नै समस्यामा
काठमाडौं । सरकारले एकातिर विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासका कामहरु हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यक्रममका लागि भन्दै बजेट माग्नेको धुइरो लागेपछि अर्थलाई तनाव थपिएको छ ...
प्राधिकरणलाई झुक्याउने हरिमानको दाउ, एयर एशियाले गर्‍यो यस्तो चलाखी
काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको एयर एसिया प्रालिको नेपालमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) लिने इन्सेन्टिभ ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हरिमान लामाले नयाँ चलाखी अपनाएका छन् । आफूले पै ...
अर्बौं घोटलामा फस्दै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक , फोर जी विस्तार अख्तियारमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको ठेक्कामा अर्बौं रकम घोटला हुन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानविन शुरु हुने भएको छ । ...
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आउने वित्तिकै शेयर कारोबारमा राम्रो फड्को मार्ने लगानीकर्ताहरुको सोच गलत भएको छ । दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै आएको नेप्सेमा मंगलबार पनि दोहोरो अंकले गिरावट आएको ...
नौबिसे–सतुंगल सुरुङ मार्गमा मोटरसाइकल गुडाउन नपाईने
काठमाडौं । सरकारले नौबिसेको सिस्नेखोला र काठमाडौंको सतुंगल नजिकको बस्नेतछाप जोड्ने सुरुङमार्गको निर्माणका लागि एक महिनाभित्रै टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ । यो सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहणको ...
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको परीक्षा
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिस उल्ट्याएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रतिनिधिसभा सांसदमा सिफारिसमा परेका पूर्व गभर्नर डा. युवारज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार ...
सेयरमार्केट भवनमा आगलागी, करोडौं क्षती
काठमाडौं । पुतलीसडकस्थित सेयरमार्केट भवनमा आगलागी भएको छ । भवनको चौथो तल्लामा रहेको एनआईसी ट्रेडिङ सेन्टरमा सोमबार बिहान साढे ९ बजे आगलागी भएको हो ।आगो काठमाडौं महानगरपालिकासँगै नेपाली सेनाको दमकल, प् ...
भारतीय नम्बर प्लेटका ओभरलोड गाडीहरु नियन्त्रणमा
इटहरी । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले भारतीय नम्बर प्लेटका ओभरलोड गाडीहरु नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालको कानुनलाई चुनौती दिंदै तोकिएको भन्दा धेरै सामान लोड गरी आएका ७ वटा भारतीय ट्रकहरु इ ...
चुइगमको खोल भेटिएको भन्दै पोखरामा विद्यार्थीमाथि निर्घाट कुटपीट
यदुनाथ बञ्जारा/पोखरा । विद्यालयलाई यातना गृह बनाउने हो भने त्यस्ता विद्यालयबाट विद्यार्थीले के सिक्लान ? सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । २१ औं सताव्दीको शिक्षा दण्ड र यातनाबाट टाढा रहनुपर्छ । तर, पर्यटकीय ...
बैंक माफिया नै आर्थिक समस्यामा
काठमाडौं । बैकिङ माफियाका रुपमा परिचित एनबी ग्रुपका संस्थापक लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठ पछिल्लो समय समस्यामा परेका छन् । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकमा रहेको संस्थापक शेयर बेच्न एनबी ...
२०७४ फागुन ६ गते
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै वाल्लेले राजीनाम दिएका हुन । सरकारको आर्थिक सल्लाकारका रुपमा रहेको आयोग नयाँ सरकार गठ ...
मध्यममर्स्यांदी जलविद्युत केन्द्र १० दिन बन्द हुने
काठमाडौं । मध्यममर्स्यांदी जलविद्युत केन्द्र मर्मतका लागि सातदेखि १० दिन बन्द हुने भएको छ । ७० मेगावाट जडित क्षमता रहेको उक्त केन्द्रको बाँधको बायाँतर्फको भूक्षयलाई रोक्न राखिको संरचनाको मर्मतका लागि ...
होटल सेभेन स्टार ‘अन्तर्राष्ट्रिय होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्वालिटी अर्वाड २०१८’ बाट सम्मानित
चितवन । सौराहामा रहेको होटल सेभेन स्टारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्वाड पाएको छ । स्पेनको ग्लोबल ट्रेड क्लबले विश्वको १ सय ५० उत्कृष्ट होटलहरुलाई हरेक बर्ष प्रदान गर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय होटल तथा ...
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै शेयर बजारमा उथलपुथल
२०७४ फागुन ३ गते
काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपत ...
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकाष्टरलाई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ...
सुमार्गीको फैसलाले सिआईवी र सम्पत्ति सुद्दिकरण बिभाग चकित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सुमार्गीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । पैसा रोक्ने कानुनी आधार र ...
६ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी १९ खर्ब नाघ्यो, एनआईसीको लगानी १ खर्ब
२०७४ माघ २२ गते
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी करिब २१ प्रतिशत बढेर १९ खर्ब ११ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरूले पुँजी वृद्धि योजनासहित आक्रमक रूपमा लगानी बढाएका छन्।गत वर ...
बागमती सफाइमा टेलिकमको सहयोग
२०७४ माघ २१ गते
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको १४ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शनिबार २४७ औं हप्ताको बागमती सफाइ महाअभियानमा सहभागी भएको छ । सो अवसरमा कम्पनीले बागमती सफाइ महाअभियानमा ...
नेपाललाई दिंदै आएको अनुदान बढायो भारतले
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई दिंदै आएको अनुदानको रकममा बृद्धि गरेको छ । भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सहायतामा ७३ प्रतिशतले बढाएको हो । भारतले आफ्नो बजेटमार्फत सहायता रकममा बृद्धि गरेको हो । बिहीबार भारतीय ...
भुटानको थिम्पुमा एआईपीको शाखा
२०७४ माघ १७ गते
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एब्रोड इन्टरनेशनल प्वाइन्ट(एआईपी) ले भुटानको थिम्पुमा पनि शाखा विस्तार गरेको छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको ...